Madaxweynaha Jubaland oo daah furay Carwada Bandhiga Ganacsiga Jubbaland – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa daah furay carwada bandhigga ganacsiga Jubaland oo ay shirkadaha iyo dhamaan ganacsatayaasha ay ku soo bandhiggeen ganacsigooda.
Carwadan ayaa ah tii abid ugu horeysay oo nooceeda lagu qabta Jubaland.
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay goobta ayaa ku booriyay dhamaan ganacsatadu in ay diirada saaran maalgashiga wadanka oo ay dardar galiyaan in ay dhaqaalahooda u huraan wadanka si uu u hormaro oo kobac guud u yeesho.
Waxaa kale oo Madaxweynahu uu ku dhawaaqay in Jubbaland ay Ugu yeedhayso ganacsatada iyo maalqabeenada dalka iyo kuwa Caalamkaba maalgashi xor ah oo madaxbanaan kaas oo saldhig ay u tahay bixinta canshuurta xaqa loogu leeyahay si shaqooyinka Dowladu ay u socdaan.
Wuxuu Madaxweynahu sheegay in dhaqaalaha faraha badan ee dibadaha la galiyay ay ka muhiimsan tahay maalgashiga dhulka hooyo kaas oo qayb ka qaadanaya horumarka wadanka isagoo balan qaaday in dhamaan dadka u baahan dhul ay goobo ganacsi ka sameeyaan ay Dowladu diyaar ula tahay waliba kuwa doonaya in ay hirgaliyaan Xarumo ganacsi oo waa weyn.
← Heshiiska garoonka Muqdisho oo dib loo eegayo
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Somaaliya Oo Si Weyn Loogu Soo Dhoweeyay Magaalada Muqdisho →